I-1000M ye-non-PoE abavelisi kunye nabaxhasi-i-China 1000M engeyiyo-PoE Factory
I-ES1208 Gigabits switch engalawulwa
I-ES1208 yi-8-port 10/100 / 1000mbps engalawulwayo ye-Ethernet switch usebenzisa i-Realtek RTL8370N chipset. I-ES1208 iqinisekisa ulwabiwo lwe-bandwidth esebenzayo kwizibuko ngalinye ngokugcina kunye nokudlulisela phambili imo kunye nolwabiwo lwenkumbulo enamandla. Inikezela ngamazibuko afanelekileyo ayi-10/100 / 1000Mbps ahambelana ne-10base-T, i-100base-TX kunye ne-1000Base-T yenethiwekhi, indawo yothethathethwano oluzenzekelayo isantya se-port 10/100 / 1000Mbps. Izikhombisi ze-LED zingabonisa amandla kunye nenethiwekhi ukudibanisa / ukunqamla amandla. I-ES1208 incinci li ...
I-ES1210P yeGigabits yokuTshintsha okungalawulwayo
Utshintsho lwe-ES1210P lutshintsho olungagunyaziswanga lwe-DCN, lubonelela ngamazibuko afanelekileyo angama-10/100 / 1000Mbps kunye namazibuko amabini ayi-100 / 1000Mbps SFP, zonke ezixhasa ukuhanjiswa kweengcingo. Izikhombisi ze-LED zingabonisa amandla kunye nenethiwekhi ukudibanisa / ukunqamla amandla. I-ES1210P inoyilo lokudibanisa oluphezulu, ubunzima bokukhanya kunye nokusebenza okulula, okulungele iofisi encinci kunye naphakathi kunye nenethiwekhi yokufikelela kukhuseleko. Iimpawu ezihambelana ne-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az ...
I-ES1226P yeGigabits yokuTshintsha okungalawulwayo
I-ES1226P yi-DCN's gigabit switch engalawulwayo yokungena, ebonelela nge-24 10/100 / 1000Mbps yokuxoxisana ngokuzenzekelayo RJ45 kumazibuko kunye namazibuko amabini e-1000mbps SFP. Akukho lungelelwaniso lufunekayo xa isixhobo sithunyelwe, kwaye ukuhanjiswa ngesantya socingo kwawo onke amazibuko kunokufezekiswa emva kokuba amandla exhunyiwe, anokuhlangabezana neemeko ezahlukeneyo zokufikelela kwi-Ethernet. I-ES1226P sisixhobo esithandwayo samashishini, iivenkile ezikwi-Intanethi, iindawo zokuhlala kunye nenethiwekhi yekhampasi yokwakha ukufikelela kwigigabit. Iimpawu ezihambelanayo ne-IEEE802.3, IEE ...
I-ES1224 Gigabits Tshintsha engalawulwa
Utshintsho lwe-ES1224 lutshintsho olupheleleyo lwe-DCN lwegigabits olungalawulwayo, olunikezela ngamazibuko angamashumi amabini anesine e-10/100 / 1000Mbps, onke axhasa ukuhanjiswa kwesantya. I-ES1224 iqinisekisa ulwabiwo lwe-bandwidth esebenzayo kwizibuko ngalinye ngokugcina kunye nokudlulisela phambili imo kunye nolwabiwo lwenkumbulo enamandla. Ikwaxhasa nolawulo lokuhamba okunokuthi kuthintele ukulahleka kwepakethi kuhanjiso nakwamkelo. Amandla asemgangathweni we-Ethernet esemgangathweni ye-IEEE802.3az kwi-ES1224 iyenza ukuba icuthe ngempumelelo ukusetyenziswa kwamandla kunye ...
I-ES1216 Gigabits switch engalawulwa
Utshintsho lwe-ES1216 lutshintsho olupheleleyo lwe-DCN's gigabits olungalawulwayo, olunikezela ngamazibuko aguquliweyo alishumi elinesithandathu / 100 / 1000Mbps, zonke ezixhasa ukuhanjiswa kwesantya. I-ES1216 iqinisekisa ulwabiwo lwe-bandwidth esebenzayo kwizibuko ngalinye ngokugcina kunye nokudlulisela phambili imo kunye nolwabiwo lwenkumbulo enamandla. Ikwaxhasa nolawulo lokuhamba okunokuthi kuthintele ukulahleka kwepakethi kuhanjiso nakwamkelo. Amandla asemgangathweni we-Ethernet esemgangathweni ye-IEEE802.3az kwi-ES1216 iyenza ukuba icuthe ngempumelelo ukusetyenziswa kwamandla kunye neprot ...